Hoggantoni MeTec fi Unveristi Walagaa hariiroo hin malle umuun gurgurtaa sera alaa gaggeesun, qabeny });
Hoggantoni MeTec fi Unveristi Walagaa hariiroo hin malle umuun gurgurtaa sera alaa gaggeesun, qabeny
Hooggantoota METEC warra tibbana qabamaanii to'annoo seeraa jala jiraan waliin gaggeessitonni yuunivarsiitii wallaggaa hariroo hin malle uumuudhaan bittaa seeran alaa caal-baasii tokkoo malee bitaa turaniru. Bittaa seeran alaa kana olantummaan kan rawwataa ture pireziidaantii yuunivarsiitii wallaggaati. Haalumaa kanaan Pireezidaantiin yuunivarsitichaa bara 2008tti fedha isaan qaaman gara dhaabbata kanaa (METEC) deemuun dookiimentii waliigaltee bittaa fi gurgurtaa meeshaaleef akka biyyaatti ba'ee jiru kan faalleessu kan dhaabbatni METEC ofiisaatiin akka fedhetti qopheesse fidee dhufe. Innis bara 2008 itti aanaa pirezidaantii dhimmaa bulchiinsaa yeroo sanaa kan turanitti kennuun; bara 2010tti immoo itti aanaa pirezidaantii dhimmaa bulchiinsaa yeroo ammaattii kennuun seera fi qajeelfamni bittaa meeshaalee mootummaan baaseen alatti hojiin hin malle hojjetameera. Kunis gatiin meeshaalees gatii gabaa yeroo sana irraa ol ka’aa qofa osoo hintaane dachaa lamaaf isaa ol akka caalu osoo beekamuu caal-baasii ifa taa’een bitamuu akka qabu utuu beekaanii bittaa kallattii akka raawwatamuuf walii galtee mallatteessanii meeshaalee gatii guddaan bituun galii godhaniiru. As keessatti kan hedduu nama ajaa’ibu yuunivarsiitiin wallaggaa xalayaa lakk ወዩ፡88,768/00/9-38/08 gaafa guyyaa 13/08/2008 barreeffameen ejensii bittaa fi bulchiinsaa meeshaa mootummaa fedeeraalaaf bittaa kallatii /direct purchasing) dhaabbata METEC irraa meeshaalee garaagaraa akka bitanif eeyyama gaafatanii turan. Garuu Ejeensiin federaalaa kun xalayaa lakk መግኢ/ወ-9/24 guyyaa 19/08/2008 barreeffameen, “Meeshaaleen yuunivarsiitiin wallaggaa METEC irraa kallattin bituuf eyyema gaafattaniif; meeshaaleen gaafataman kunnin biyya keessa dhaabbileen garagaraa dhiyeessuu kan danda’an gahaatti waan jiranif bittaan kallattii kun kan hin eyyemamne akkasumas bittaan kun baay'ee barbaachisaa/dirqama yoo tae METECn dabaluun baay'inni isaani yoo xiqqaate dhaabbilee shan (5) fi isaa ol kan humna/muuxxannoo gahaa qabaaniif haala seera qabeessa ta'een affeeruun caal-baasii murtaaan dorgomsiistaanii bituu dandeessu” jechuun deebii kenne ture. Haa ta’u malee,hooggantootni yuunivarsiitii wallaggaa kun aangoo harkaa qaban duwwaa abdachuun hooggantoota METEC waliin seera, qajeelfama, adeemsa hojii fi hojjimaata mootummaa cabsuun caalaatti qajeelfama qaamni mootummaa kallattin isaan dhorkee irra darbuun bittaa kallattti dhaabbata METEC irraa bara 2008 fi 2010tti bittaa seeran alaa rawwaatanii jiru.
Haaluma kanaan:- 1. Itti-aanaan pirezidaantii dhimma bulchiinsaa bara 2008 bittaa kallattii seeraan alaa akkaa rawwaatamuuf qarshii 66,298,978.72 ta’u METEC irraa bituuf dhaabbata kana waliin waliigaltee Mallatteessera. Itti dabaluunis kan seera/qajeelfama bittaa meeshaa keessatti kan hin eyyemamne kaffaltiin dursaa (Advance_payment) dhibbeentaa 30 (30%) METEC’f akka kanfalamuuf waliigaltee kana keessa jira. Meeshaleen kunis Adoolessa 11 bara 2008ti kaasee modeela 19tti kan galii ta'e yeroo ta'u kaffaltiin METECf kanfalame isaa waliigaltee irra jiruun qarshii 7,576,305.98 tiin ni caala. Walumaagalatti qarshiin 73,875,284.70 kanfalamee jira.
Gama biraan waliigaltee kana keessatti kutaalee laabiratorii keessa keemikaalli Epoxy jedhamu akka dibamuuf bal’inaa 5800 m2 kan tae qarshii 4,651,600.00 ta'u METEC waliin waligalame ture. Haata'u malee haaluma gidduu kana waa'ee rakkoo qisaasau qabeenyaa fi malaamaltummaa hooggantonii METEC hojjechuun shakkamanii to'atamaniin walqabatee documentary miidiyoota kan akka ETV, OBN, FANA fi Walta fa'aa qopheessuun tamsaasan irratti akka hubachuun dandaamutti keemikaalli Epoxy jedhamu kan warri METEC gargaaramaa turaan kan yeroo tajaajilli isaa irra darbee fi ammallee kuusaa meeshaa dhaabbatichaa keessa hedduminaan kan jiru tau isa beekamee jira. Kunis meeshaaleen adda addaa Yuunivarsiitii Wallaggaaf dhiyaachaa turanii fi ammas hojiin laaboraatorii hojjetamaa jiran kan qulqullina hin qabne (substandard product) ta'uun isaa ifaadha. 2. Halumaa lakk. 1 irratti caqasameen kan wal fakkaatu itti-aanaan pireziidantii damee bulchiinsaa kan yeroo ammaa bara 2010 keessa gaafa guyyaa 22/01/2010 caal-baasii tokko malee qarshii 57,190,420.79 waliigaltee METEC’n waliin gochuun bittaa seeraan alaa bittaan kallattii akka rawwatamu ta’eera. Bifa wal fakkaatuun asittis qajelfama bittaa meeshaa keessatti kan hin eyyemamne kaffaltiin dursaa (Advance payment) dhibeentaa 30 (30%) METECf akka kaffalamuuf waliigaltee kana keessas ni jira. Meeshaleen bitaman kunnenis hagayya bara 2010 galii ta'aniiru. Haaluma olitti caqasameen waliigaltee METEC fi itti-aanaa pireziidaantii damee bulchiinsaa yuunivarsiitii Wallaggaa bara 2010tti mallatteeffame keessattis kutaalee labooratorii keessa keemikaala Epoxy jedhamu akka dibamuuf balinaa 2900 m2 kan tae qarshii 2,347,416.00 tau METEC waliin waligalamee kaffaltin isaas rawwatame jira. Kun immoo keemikaala yeroon itti darbe tauun isaa beekamaadha. Kaffaltiin kaffalamees kan waliigaltee irratti caqasameen olitti ta'uu ragaan jiru ni mirkaneessa. Osoo dhugaan jiraate, yuunvarsiitiin waa'ee qulqullina meeshaalee mirkanneessuu irratti ofirra darbee isa kaanuu deeggaruu qaba ture! Nama gaddisiisa!. Kunis waliigaltee lamaan armaan olitti caqafamani keessatti yeroon meeshaaleen bitamanii itti galii ta'aa turan akkaataa waliigalticha irraatti kaa'ameen osoo hin taane erga yeroo isaa darbee ture. Kunis kan 2008ti bara baajeta 2009ti; kan bara 2010 immoo bara baajeta 2011tti kan galii ta'e ta'usaa ragaan jiru ni agarsiisa. Walumaagalatti yuunivarsiitiin Wallaggaa dhaabbata METECf meeshaalee qulqullina hin qabneef qarshii billiyoona 1.2 ol baasii godhaniiru. Kunis akkuma METEC dhaabbata biyya alaa irraa caalbaasii malee meeshaalee garagaraa galchaa ture, Yuunivarsiitiin Wallaggaa immoo caalbaasii malee iddoo buufata (receiver) dhaabbata METEC taeera.
As keessatti kan hubatamu qabu hooggantootni waliigaltee kana mallateessan lamaan labsii yakkaa farraa malaamaltuummaa murteessuuf bae labsii lakk. 881/2007 ba'e keewwata 9 keewwata xiqqaa 1jalatti caqafame darbuun angoo seeraan kennameef jiru alaatti darbaani kan rawwatanii yeroo ta'u waliigaltee kana akka mallateessu kan ilaallatu itti aanaa pireeziidantii dhimma barnootaa ta'uu qaba ture. Akka waliigalaatti wantii asi olitti caqafame kun kan hedduu nama raaju wallallummaaf ykn hojiif jedhamee kan rawwatame osoo hin taane faayidaa dhuunfaa hin malle argachuuf, anga'oota METEC duukaa waliigaluun qabeenyaa mootummaafi uummataa waan qisaasaniif qaamooleen dhimmi isaa ilaallatu hundii ariitiidhaan tarkaanfii sirreefamaa fudhachuudhaan yuunivarsitii keenya akka maqaa isaa gara dhaabbata barnootaa, qo'annoo fi qorannoo akkasumas kan tajaajila hawaasaa kennuu taasiisuun dirqama yeroon gaafatudha." Horaa bulaa!